Imbasa yeTim Cook, ukuthunyelwa kwee-AirPod, ukubukwa kweApple nokunye okuninzi. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Imbasa kaTim Cook, ukuthunyelwa kweeAirPod, ukubukwa kweApple nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Sele siyigqithile iveki yokuqala ka-Okthobha kwaye sibona «ukuzola okukhoyo» emva kohlaziyo oluphezulu lweMacOS eSierra ngenxa yeengxaki zabasebenzisi abaninzi ngenkqubo yefayile entsha ye-APFS.
Ngayiphi na imeko, uninzi lwabasebenzisi aluboni ngxaki kwinguqulelo entsha kwaye izixhobo zabo sele zihlaziyiwe, abanye balinde ukubona ukuba kwenzeka ntoni kwaye abambalwa bazimisele ukungayihlaziyi kwi-MacOS High Sierra nangona ingekuko okona kulungileyo. Ngayiphi na imeko sineendaba ezibalaseleyo evekini in Ndivela eMac kwaye ezi zezinye zazo.
Eyokuqala yeendaba esiza kuziqaqambisa kule Cawe yile Imagazini yeVanity Fair ngubani osandula ukupapasha uluhlu lwabantu abanempembelelo kwihlabathi, uluhlu esinokubona ngalo ukuba uTim Cook uphakame njani kwishumi elinanye awayehlala kulo nyaka uphelileyo, ukuya kwindawo yesithathu ukugqwesa uLarry Page, umseki-mbumba weGoogle kunye noElonk Musk weTesla / Space X.
Ixesha lokuhambisa ii-Apple AirPods ezintsha zahluka kakhulu. Kule veki inye saphinda savuma ukulahla ixesha lokuthunyelwa Kwaye ngoku kujongeka njengokuthengisa okanye isitokhwe sisekuhle ngoku Ixesha liyanda kwakhona, ubuncinci eSpain.
UApple ukhuphe kule veki ingxelo entsha ye-watchOS 4.0.1 yohlobo lwe-3 yemodeli ye lungisa imiba yokunxibelelana ne-LTE. Kule meko kunokwenzeka ukuba ayingabo bonke abasebenzisi abanemodeli kodwa kuyinyani ukuba Zonke iinguqulelo zesoftware ezikhutshwe ngu-Apple zineebugs ezininzi.
Okokugqibela, asifuni kukushiya nale "incasa imbi emlonyeni wakho" kwaye yiyo loo nto sincoma lo mdlalo, Umhlaba ophakathi: Izithunzi zikaMordor. Lo ngumdlalo ophuhliswe yiMidlalo yokuNxibelelana kweFeral kwaye isekwe kwi-saga ye "INkosi yeeRingi" ethiNgokuqinisekileyo uyavuya kubathandi be-saga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Imbasa kaTim Cook, ukuthunyelwa kweeAirPod, ukubukwa kweApple nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Umboniso weLuna, isixhobo esincedisa iMac yakho eya kukuvumela ukuba usebenzise i-iPad njengescreen sesibini